नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : राष्ट्रबादी "मेरे भाईसाब" ! नेपालको झण्डाको आकार र रुपरङ्ग पनि फेरिएछ नि ! तपाईंको नेपाली पोशाक फेरिएझैं !!
राष्ट्रबादी "मेरे भाईसाब" ! नेपालको झण्डाको आकार र रुपरङ्ग पनि फेरिएछ नि ! तपाईंको नेपाली पोशाक फेरिएझैं !!
मोदीको स्वागतमा अरु सबै गरेको देखियो नेपालमा तर खुट्टा धोएको पानी खान बाँकी रह्यो । हुन त अर्को भ्रमणलाई बाँकी राखेका होलान !
फोटोहरु यसरी आफै समाचार बोल्छन !